Dawladdu aad diyaarad u gaar ah waxaa loo arkaa raaxo a by badan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira faa'iidooyinka charter turboprop jet ah in inta badan ku filan si fudud u bi'isaa karaa kharashka raaxo ah. Gunnada ugu weyn waa sahlanaato, iyo sahlanaato in ku yimaado noocyo badan. raaxadeeda waxa ugu weyn waa in aad ka fogaato karaa TSA iyo fogaado dhufatid suxullada aad la shisheeyayaal ku madaarada dadweynaha caadiga ah. Douglas Adams ayaa mar sheegay in waxba kuma jiraan sida foosha xun ee dunida sida garoonka diyaaradaha dadweyne. Oo isna wuxuu lahaa hal dhibic. Tan iyo markii ay diyaarad u kiraysnaa la saqaf karaa on a garoomada uga yar, aad isaga ilaaliso khadadka caadooyinka, TSA, iyo mashaakil kale oo duulaya dadweynaha.
Faa'iido kale oo ka mid ah charter jet turboprop ah waa in aad si dhab ah ugu shaqayn karin halka safraya. On hawada, in diyaarad uga yar, kursiga aad dooratay, waxaad si fudud u shaqayn kartaa on your phone ama laptop. Haddii aad u soo bandhigaan ka dib markii degtey, ama la kulmo qaar ka mid ah wada-hawlgalayaasha ganacsiga, aad diyaarin kartaa soo bandhigidda ama shirka lagu guda jiro safarka. diyaarado badankood waxay leeyihiin xiriir Internet, telefoonada, fakisyo iyo goobaha kale in aad u dhow xafiiska labaad.
faa'iidooyinka kale ee waaweyn ee dawladdu aad jet yihiin gaarka ah iyo qarsoodinimada. On diyaarad kiraysnaa, uma baahnid inaad wax laga walwalo qof raadinaya badan garabkaaga at screen aad laptop ee. Haddii aad diyaarado adigu, aad tahay xorriyad ay u yeedhi co-rakaab ah adiga kuu gaar ah. Haddii diyaarada soo kiraysatay shirkadda aad, aad co-rakaab ah uu noqon doono asxaabtaada u gaar ah, taas oo ku xidhan oo la amray by shirkadda in ay u safraan aad la.
Speed ​​waa faa'iido kale ee waaweyn ee dawladdu aad diyaarad u gaar ah. Tan iyo diyaarado Chartered baahan dhis yar, waxaa jira dad badan doorashooyin dheeraad ah ee garoomada diyaaradaha ay u isticmaali karaan. Taas macnaheedu waa in aad hoos u dhigi kartaa wakhtiga safarka si aad u iyo garoonka diyaaradaha. Markaasuu, marka aad joogto garoonka diyaaradaha, aad badbaadin waqti on caadooyinka safka. Guud ahaan, waxaan ka heli in faa'iidooyinka charter jet turboprop aad u badan ka badan oo kaliya raaxo ah.